ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပသည့်အပေါ် အမတ်လောင်းများ ဝေဖန်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပသည့်အပေါ် အမတ်လောင်းများ ဝေဖန်
ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပသည့်အပေါ် အမတ်လောင်းများ ဝေဖန်	မျိုးသန့်	| သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၁၇ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့ချိန်မှ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ကြေညာလိုက်ခြင်းမှာ မရိုးသားသော လုပ်ရပ်ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာက ဝေဖန်လိုက်သည်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်များ ဖြစ်သည့် ဖားကန့်၊ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်း မြို့နယ်များတွင်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိဟု နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့ခြင်း ကို ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။"ကျမတို့ကိုလည်း ဘာမှ အကြောင်းမကြားဘူး။ ဒါက ရိုးသားမှု မရှိဘူး။ လုံခြုံရေးက ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျမတို့လည်း ညညနေ့နေ့ ဒီအတိုင်း သွားလာနေတာပဲ။ ဘာ အနှောက်အယှက်မှ မရှိပါဘူး။ ဖားကန့်မှာ ကျမက လုံးဝနိုင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို ဒီလိုလုပ်တယ် ဆိုတော့ ဒါ သက်သက်လုပ်တဲ့ သဘောပါ" ဟု ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ဘောက်ဂျာ က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဒေါက်တာတူးဂျာကလည်း ၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေမရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်း မြို့နယ်ကော်မရှင်မှ ၎င်းထံ အကြောင်းကြားလာခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။"ဒီမှာကတော့ စိုးရိမ်စရာဘာမှ မရှိပါဘူး။ လုံခြုံရေး စိုးရိမ်လောက်တဲ့ အခြေအနေတော့ မရှိဘူး။ အခုကတော့ မဲရုံအခြေအနေတွေကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီလိုပဲ နေရုံပဲပေါ့ဗျာ။ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ အာဏာပိုင်တွေလုပ်တဲ့ အလုပ်ဆိုတော့လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုပဲ နေရုံရှိတယ်" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိဟု ကြေညာခဲ့သည့် ဖားကန့်မြို့နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ ဗန်းမော် မြို့နယ်များအနက် ဖားကန့်မြို့တွင် မဲရုံပေါင်း ၇၁ ရုံ၊ မိုးကောင်းမြို့တွင် မဲရုံပေါင်း ၆၅ ရုံ တို့ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ NDF ပါတီနှင့် မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် NLD၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ NDF ပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ပံတောင်း ကော်မရှင်အား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်များ ကူညီ	ဟဲဟိုး လေယာဉ်ပျက်ကျမှု စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေး	လက်ပံတောင်းသပိတ် ဖြိုခွင်းမှုကိစ္စလည်း ကော်မရှင်စုံစမ်းမည်ဆို	တရားသေလွှတ်ပေးရန် NLD ဦးဉာဏ်ဝင်း လျှောက်လဲချက် တရားရုံး ပယ်ချ	ကချင်ကျောင်းသူ သေဆုံးမှု စုံစမ်းပေးရန် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြား	ဒု-ဝန်ကြီးများ၏ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရန် မရှိသေး	ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုသော ဦးမိုးသီးဇွန် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရန် တောင်းဆို	Who is Online
We have 132 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved